मानिस मोबाइल र इन्टरनेटको दासी भयो
१३ श्रावण २०७६, सोमबार ११:३१
प्रकाश पाण्डे । समय पनि कस्तो आयो? निहुरिएर स्क्रिनमा फुर्सदै छैन । घटना सूचना हेर्दै लाइक कम्मेन्ट गर्दै ह्याप्पी वर्थ्डे, रिप लेख्दै ठिक्क छ। प्रत्यक्ष सम्वादको अवस्था सकिएको छ।भेट पूर्व नै सूचना र खवरको ज्ञात भएको हुन्छ । के गर्दै हुनुहुन्छ ? सन्चै हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न प्रत्यक्ष रुपमा मृतप्रायः भएका छ्न्। यी र यस्तै गतिविधि र ब्यवहारले संस्कार दिक्क भएको छ। ऊ मनमनै भन्छ“ केही बाँकी छ भने त्यो वास्तविक मुस्कान र स्पर्श मात्र बाँकी छ नत्र अब केही बाँकी रहेन, मानिस मोबाइल र ईन्टरनेटको दासी भयो । प्यासी भयो । नराम्रो सरावी भयो । मौलिकता सिध्याएर सनातनहरु र परोक्षहरु कृत्रिम भए । ती नै बलिया र यथार्थहरु बन्दै जादैछन् । सत्य बन्दैछन् । तथ्य बन्दैछन् । “ऊ भन्छ, “थाहा छैन् मेसिनले हाम्रो मन भित्र पनि शासन गरेर भावनाहरुलाई सिध्याएको देख्दा रुन मन लाग्छ।“
ऊ स्कुलको एउटा कर्मचारी हो । बर्षे छुट्टी भएर स्कुल लागेकै दिन जब एउटा मान्छे ठिङ्ग उभिएर उसलाई दिनभरिको काम लगातार अह्रायो । ऊ छ्क्क पर्यो । उसले काम गर्न थाल्यो त्यसको निरीक्षण गर्यो। लेखाजोखा र्गयो । रेकर्ड राख्यो । अह्राएन मात्र काम सिकायो पनि। सिकाएन मात्र थर्कायो पनि। बैद्धिक कार्यमा पनि सहयोग गर्यो । ऊ अचम्मित भयो । निक्कै डरायो । आफ्नो पेशा र क्षमताप्रति नै सशंकित भयो ।
यस्तो आश्चर्य जनक घटना उसको जीवनमा कहिल्यै भएको थिएन । त्यस दिनको अन्त्यमा सबै स्टाफहरुलाई एकै ठाँउमा राखेर हेड्सरले भने, ‘म एआई जडित मानव निर्मित उच्च स्तरको बौद्धिक यन्त्रमानव हुँ । अब म प्रत्येक स्कुलमा समय र बौद्धिकताको भष्टाचारी र अल्पज्ञानीहरुलाई एक एक गरि ठिक लगाउँछु । त्यस दिनदेखि उक्त मेसिन उसको प्रमुख हो भन्ने थाहा पायो । छाँगाबाट खस्यो । मानव जगतको नरसंहार देख्यो । जागिर त के जीवन देखिनै मेसिनको दासी भएकोमा चरम निराशा छायो। मुठ्ठीभरका शासक र बौद्धिक भनिनेहरुले मेसिन मार्फत वास्तविक मानिसलाई गरेको शोषण र खोसिएको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हनन् देख्दा उसलाई बारम्बार रिंगटा लाग्छ । दिक्क लाग्छ।मानव जातिकै सबैभन्दा ठूलो असफलता लाग्छ।संसारकै सबैभन्दा ठुलो नैतिक प्रश्न हो भन्ने लाग्छ।
घर पुगेर टुसुक्क भुइँमा बस्छ। माथि दलिनमा सिसि क्यामरा र रेकर्डर देख्छ। उसले ठन्डा दिमाग लगाएर सोच्छ, मेसिन नियन्त्रणको औजार हो। औजारबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ । शक्तिसँग सबै सामाजिक, राजनितिक, धार्मिक मानिसहरु आकर्षित हुन्छन् । अझ आविष्कारबाट प्राप्त हुने शक्तिसँग सबै यहाँ नतमस्तक छन् । रोमान्चित छन् । आफूलाई बैभवशाली ठान्छन् ।अत्याधुनिक ठान्छन् ।त्यसलाई आत्मासाथ गरेकै छन् । यसमा मैले मात्र चिन्ता गर्नुपर्ने किन? मैले पनि यसरी फरक तरिकाले सोच्दा र लिदा हुदैन्? यसलाई मैले पनि महान उपलब्धि मान्दा र आत्मासाथ गर्दा हुदैन? म पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छु।
“धन्यवाद ! संस्कार जी! तपाइँको यो सकारात्मक सोचको म सलुट गर्छु।“ स्कुलको मेसिनरी हेडसरले भन्यो। ऊ पुनः अचम्मित भयो। उसले ढिलो गरि स्वागत छ हेड्सरले भन्यो तर त्यतिबेला अचम्म मेसिनरी हेड्सर लोप भइसकेका थिए।
(प्रकाश पाण्डेको फेसबुकबाट)
रमण श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण आयोगको अध्यक्ष बनाइए वैधता समाप्त हुन्छ
नेकपामा माधवकुमार नेपालको वरीयता घट्यो कि प्रभाव बढ्यो ?